Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Militaiga Zimbabwe oo Talada Dalka Lawareegay.
Deg Deg: Militaiga Zimbabwe oo Talada Dalka Lawareegay.
Posted by ONA Admin	/ November 15, 2017
Ciidamada Militariga ee dalka Zimbabwe ayaa xalay saqdii dhexe iyo Saaka oo Arbaca ah la wareegay Telefishinka dowlada ZPC iyo qaar kamid ah Xarumaha dowlada. Askar ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa wadooyinka caasimada Harare.
Afhayeen u hadlay Militariga oo kasoo muuqday Telefishinka ayaa sheegay in hawlgalka socda uusan ahayn afgembi balse ay wadaan hawlgal ay kusoo qab qabanayaan budhcad ku hareeraysan Madaxweynaha iyo Madaxtooyada, ayuu yidhi Gen. Moyo.
Gen. Moyo ayaa dhinaca kale sheegay in Madaxweynaha iyo Qoyskiisa ay nabad qabaan isla markaana xaalada ay caadi kusoo noqon doonto marka ay soo afjaraan hawlgalka socda.
Hawlgalkan ayaa kusoo beegmay todobaad kadib markii Madaxweyne Robert Mugabe uu xilka ka qaaday Madaxweyne kuxigeenkiisii Emmerson Mnangagwa oo la filayey inuu noqon doono ninka xilka kala wareegi doona. Madaxweyne kuxigeenka xilka laga qaaday Asbuucii hore Mr. Emmerson Mnangagwa ayaa taageero badan ku leh Militariga dalkaasi.
Taliyaha Militariga Zimbabawe Constantino Chiwenga ayaa todobaadkii hore sheegay inay talabooyin qaadi doonaan. Taliska Militariga ayaa sidoo kale sheegay in xilka Madaxweynaha uusan qabin karin qof aan kamid ahayn dadkii usoo halgamay dagaalkii xoriyada wadankaasi.
Madaxweyne kuxigeenka xilka laga qaaday Emmerson Mnangagwa oo kamid ahaa raga fara ku tiriska ah ee kasoo hadhay raggii lasoo halgamay Mugabe dagaalkii xoriyada ayaa isagu maalmo kahor wadanka isaga baxay walow uu sheegay inuu soo noqon doono.